‘भ्यालेन्टाइन डे’मा ओपोको प्रेमिल उपहार: एफ फाइभ ड्यासिङ ब्ल्यू
काठमाण्डौ । ओपोले विभिन्न उत्सव, चाडपर्व लगायतको अवसर पारी आफ्ना फोनका विभिन्न मोडलमा आधारित लिमिटेड एडिसन स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । यस पटक भ्यालेन्टाइन्स् डेको अवसर पारेर कम्पनीले ओपो एफ फाइभको ड्यासिङ ब्ल्यू एडिसन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अहिले सम्म सार्वजनिक गर्ने निश्चित मितिको निक्र्यौल भई नसकेको...
ओपो ए ८३ सार्वजनिक, मनै लोभ्याउने यस्ता छन् विशेषता
काठमाण्डौ । सेल्फी एक्सपर्ट एण्ड लिडर, ओपोले ईण्ट्रि लेभल क्यामेरा फोन अन्तर्गत नयाँ ओपो ए८३ सार्वजनिक गरेको छ । ए८३मा यस मूल्य श्रेणीका फोनमा बिरलै उपलब्ध हुने फुल स्क्रिन डिस्प्ले फिचर उपलब्ध छ । साथै, यसमा यूवा पुस्तालाई वास्तविक तथा प्राकृतिक सेल्फी अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ एआई ब्यूटी रिकग्निशन प्रविधि पनि उपलब्ध...
ओपोको ४ लोकप्रिय मोडलको मूल्य समायोजन, कुनको कति ?
काठमाण्डौ । चर्चित मोवाइल ब्राण्ड ओपोले नेपालमा आफ्ना केही लोकप्रिय फोन मोडलको मूल्य समायोजनको घोषणा गरेको छ । कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार अब ओपो एफथ्री, एफवान एसका दूबै भ्यारियण्ट (३ जीबी तथा ४ जीबी) र ए७१को मूल्य समायोजन गरिएको छ । आफ्ना उपभोक्ताहरुका लागि नजिकिँदै गरेको नयाँ बर्षको कोशेलीस्वरुप कम्पनीले मूल्यमा...
एशियाको १५ % बजार ओपोको कब्जामा, सामसङसहितका ब्राण्ड पछि परे
काठमाण्डौ । विश्व बजारकै अग्रणी प्राविधिक ब्राण्ड ओपोले एसियाली बजारमा १५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ । ओपोले भिभो, सियाओमी, सामसुङ र हुआवे लगायत स्मार्टफोन निर्मातालाई पछि पार्दै अग्रणी स्थान हात पार्न सफल भएको हो । ओपोलाई पछ्याउँदै १३ प्रतिशत बजार हिस्सा सहित भिभो दोस्रो स्थानमा छ भने, १२ प्रतिशत बजार हिस्सा सहित सियाओमी र...
छोटो समयमै ओप्पोले पायो पाँच तारे रेटिङ
काठमाण्डौ । स्मार्टफोन निर्माता, ओपोलाई बहुप्रतिष्ठित क्यानस्टार ब्लू अवार्ड्सद्वारा ‘समग्र उपभोक्ता सन्तुष्टि–स्मार्टफोन’ श्रेणीमा सन् २०१७का लागि सम्मानित गरिएको छ । क्यानस्टार ब्राण्ड सम्बन्धी सोध तथा रेटिङ प्रदान गर्ने अष्ट्रेलियाकै सर्वाधिक ठूलो मध्यको एक रिसर्च कम्पनी हो । अष्ट्रेलिया स्थित क्यानस्टारले...
ओप्पोको एफफाइभ ब्ल्याक एडिसन सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषता
काठमाण्डौ । सेल्फी एक्स्पर्ट एण्ड लिडरका रुपमा आफ्नो परिचय स्थापित गर्न सफल ओपोले मंगलबार आफ्नो नयाँ मोडल ओपो एफफाइभ सिक्स जीबी कालो रंगमा सार्वजनिक गरेको छ । कालो रंगमा सार्वजनिक गरिएको एफ फाइभ सिक्स जीबीको मूल्य रु. ४४ हजार ९ सय ९० निर्धारण गरिएको छ । साथै, कम्पनीले ओपो एफफाइभ यूथ पनि मूल्य रु. २७ हजार ९ सय ९० मा उपलब्ध गराउने जानकारी...
ब्ल्याक एडिसनमा एफफाइभ सिक्स सार्वजनिक गर्दै ओप्पो, यस्ता छन् विशेषता
काठमाण्डौ । भर्खरै नेपाली बजारमा एफ फाइभ सार्वजनिक गरी आफ्नो परिचय सेल्फी एक्स्पर्ट तथा लिडरका रुपमा स्थापित गरेको ओप्पोले आफ्नो नयाँ मोडल ओपो एफफाइभ सिक्स जीबी कालो रंगमा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ । ओप्पोले आफ्ना उपभोक्ताहरु(विशेष गरी यूवा पुस्ता)लाई छनोटको थप अवसर उपलब्ध गराउने सोचका साथ नयाँ उत्पादन कालो रंगमा सार्वजनिक गर्न...